Maraoka: Firenena nisara-kevitra noho i Gaza · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Janoary 2009 11:21 GMT
Ary satria moa mivory any Doha ny mpitarika Arabo, dia lasalasa saina ihany izao tontolo izao te-hahalala hoe amin'ny fomba ahoana moa ahafahan'izy ireo mampitsahatra ny fifanandrinana misy any Gaza. Omaly no nipoaka ny vaovao fa tsy ho any Doha na fihaonana an-tampony hafa ny mpanjakan'i Maraoka Mohammed VI, satria lazainy fa “tsy hahavita inona hamonjena ny vahoaka Palestiniana.”
The View from Fez no namoaka ny antsipiriany amin'ny tsy fahatongavan'ny Mpanjaka:
Namoaka fanambarana angazety ny biraon'ny mpanjaka tamin'ny alarobia fa mba tsy isian'ny mizana mitongilana sy noho ny fitotongan'ny toe-draharaha arabo, fa tafalatsaka ambany tsy misy tahaka izany hatrizay nahafantarana ny tantara ny fiaraha-miasan'ny samy Arabo.
Na dia ny fanoloran-kevitra hihaon'ny Arabo fotsiny aza dia efa miteraka fifamaliana sy adivarotra, eny fa na dia eo amin'ny samy firenena arabo izao aza, hoy ny fanambarana nanamarika, fa ireny tsy fifankahazoan-kevitra tsy misy dikany ireny no manarona ny foto-kevi-dehiben'ny Ummah, indrindra ny momba ny Palestiniana, ka manaloka ny tena anton'ny ady any amin'ny faritra ka manjary manome vahana ny tena fahavalon'ny tontolo Arabo.
Nomarihin'ny fanambarana fa izany fisarahan-kevitra izany no mahatonga ny hevitry ny vahoaka Arabo hieritreritra fa misy ny finiavan'ny mpitondra Arabo te-hahazo vahana samirery amin'ny faritra (~hanjakazakana), toe-javatra tian'i Maraoka idifiana mandrakariva.
Milaza ny heviny amin'ny tsy handraisan'ny Mpanjaka Mohammed VI ny mpamaham-bolongana Maraokana Taha Belafrej [fr] :
Ao amin'ny fanambarana navoakan'ny fiadidian'ny Mpanjaka naelin'ny MAP [Maghreb Arab Presse, mpanangom-baovaon'ny fanjakana], no hanazavana ny anton'ny tsy handraisana anjara.
Toy izao ny sombin'ny fanazavana:
“Na inona na inona ny fijery ny zavamisy tsy mitongilana sy maharary noho ny herisetra ivelany, dia tokony hiaiky kosa isika fa ny olana dia ao anatin'ny vatana Arabo ihany, ka avy amin'izany ny vahaolana dia miainga amin'ny arabo ihany.”
Ibn Kafka [fr], moa ho famaliana ny fanambarana manontolo ataon'ny fitondrana Maraokana (hita ao amin'ny vohikala MAP amin'ny teny frantsay), milaza fa “maivana avokoa ny fanehoan-kevitra,” manohy milaza zavatra bitika.
Mpaneho hevitra iray no diso fanantenana amin'ny tsy fahampian'ny famakafakan'i Ibn Kafka milaza hoe:
Herinandro vitsivitsy izao no nitsidihako io bolongana io. Ary dia nanaitra ahy ny tsy fisian'ny famakafakana, tsy fisian'ny fampahatsiarovana ny tantara, tsy fisian'ny fomba fijery politika!Raha avy amina mpahay lalàna aloha dia hitako maivana tokoa izany, indrisy! Tsy avy amin'izany anie no ahitana mazava kokoa e!Hankahalaina kokoa ny Jiosy, mazava izany! Ankoatra izay tsy misy zava-dehibe hafa!
Ary ny hany tsikera … dia ny fanapahan-kevitry ny M6 tsy handray anjara amin'ny fihetsiketsehana ivelany Ataon'ny zanaky ny mpanjakan'ny hoala!
*M6 no fanafohezam-panononana ahalalana ny Mpanjaka Mohammed VI.
Raha miakatrakatra ny adihevitra amin'ny fanapahan-kevitry ny mpanjaka, ny mpamaham-bolongana hafa kosa mieritreritra hoe ahoana moa no ataon'ny fitondrana Arabo maro hampiatoana ny fanafihan'Isiraely any Gaza. Abdelilah Boukili no anisan'izany mpamaham-bolongana izany.
Raha ho an'ny olona eny an-dalambe dia tokony hisy ny fidiran'ny miaramila an-tsehatra any amin'ny sisintanin'i Egypta , Jordania ary Libanona hanakanana ny fananiham-bohitra ataon'isiraely. Saingy nofinofy ihany izany. Tsy manana vondro-tafika tahaka ny OTAN manana fanazarantena iraisana sy etamazaoro iraisana ny arabo hahafahana miara-miasa ara-miaramila hanatanteraka asa. Maro ny paipaika politika mahatonga ny firenena maro hisalasala amin'izany fampiraisana hery izany.
Efa naneho ny firaisankinany tamin'ny palestiniana tamin'ny alalan'ny fihetsiketseham-panoherana, fanamelohana ary ny fandefasana fanampiana ny Arabo.
Mbola takiana amin'ny palestiniana ihany koa hanehoany ny firaisankinany mialoha ny hangatahany firaisankina amin'ny Arabo. Mampitombo ny elanelana amin'ny tokony hanohanana azy ireo ny fisarahan-kevitra ananan'ny palestiniana.
Actual Digital [es], ao amin'ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “No a la barbarie…The Slaughter Must Stop,” [Tsia amin'ny fanaovana fanahim-biby… Tsy maintsy ajanona ny famonoana] no nilazany fa, “Quien quiere hoy borrar Gaza del mapa, mañana será borrado del mapa de Oriente Medio” [”Izay rehetra mitady hanala amin'ny sarintany an'i Gaza, dia ho voafafa amin'ny sarintanin'i Azia andrefana (atsinanana akaiky)]. The blogger goes on to say:
Tsy mitsahatra ny helon'i Gaza: fatiolona sy faharatrana tahaka ny ahoana moa no tadiavin'Isiraely vao hilaza ny fandreseny izy ireo? Ny hanala tanteraka an'i Gaza amin'ny sarintany ve no tadiavin'Isiraely? Fa raha izany no tadiavin-dry zareo izao, dia tsy ho fantany akory ny miandry azy ireo rahampitso. Fa na dia efa nahafaty tsy manantsiny 1 000 sy 5 000 ka ao anatin'izany ny zaza amam-behivavy dia mbola manohy ny heloka ataony ihany i Isiraely, Ka manda ny vahoaka Palestiniana hiaina tahaka ny olona hafa. Miantsoantso ny manao politika sy ny miaramila : “Tsy mbola tratrany ny tanjona… Mitovy hatrany ny zavatra lazainy nandritra ny 60 taona, ary inona moa ny tanjona: Mitombo ny Palestiana maty, mitohy ny vono olona, mitombo ny voina ary tsy misy tara-panantenana hiainana amin'ny fahafahana? Izany ve no tadiavin'ny tandrefana ho hita? Aiza izany Fianakaviambe iraisam-pirenena izany, amin'izao fijalian'ny Palestiniana izao dia hita fa ny tombotsoan'izy ireo ihany no arovany… sy ny mpiara-dia aminy. Fa angaha moa tsy lalàna iraisam-pirenena mitovy no ampiaharina amin'ny firenena sy ny vahoaka rehetra?
Ny Mpamaham-bolongana ao amabdiky ny anarana Mon Paradis Inanimé no nanamarika fa misara-kevitra ny maraokana momba ity ady ity:
Les jeunes marocains sont aussi divisés et du jour au lendemain une grande majorité des jeunes est devenue religieuse comme par miracle! L’effet médiatique est à son comble. Malheureusement une grande partie des jeunes se laisse emporter par les médias et manque d’esprit critique. Hier encore je fus supprimée de la liste de contacts d’un ami parce que je l’ai décrit comme antisémite et ce parce que je lui ai dit qu’il y a une différence immense entre un juif et un sioniste. Le judaïsme existe depuis des millénaires alors que le sionisme est centenaire. Les sionistes sont des personnes athées qui se sont servies des religions pour leurs profits personnels. Les juifs pratiquants déclarent haut et fort que dans leur livre religieux, la terre palestinienne ne leur appartient pas. Mais ça c’est un autre débat dans lequel je ne souhaite pas entrer. Je ne suis pas religieuse.
Misara-kevitra ny olona amin'ity raharaha ity. Gaga tanteraka aho nahita mpivavaka Miozolmana tsy manohana ny Hamas: “Ireo no manao ny olona ho fitaovany sy tompon'andraikitry ny fahafatesan'olona maro any Palestina!” Hoy izy ireo. Misara-kevitra toy izany ihany koa ny tanora ary tampotampoka teo dia mahagaga fa lasa mpivavaka tampoka ry zareo! Nisy fiantraikany lehibe ny fampielezam-baovao. Saingy indrisy moa fa ahodikodin'ny fampielezam-baovao sy ny tsy fananana saina hahay hamakafaka ny lohany. Vao omaly izao dia nesorin'ny namako iray ao amin'ny lisitra ifandraisana aho satria nilaza azy ho toy ny mpankahala ny taranaky Sema aho (antisemita) ary misy fahasamy hafana lehibe izany hoe Jiosy sy izany hoe Sionista izany. Efa anarivony taona no nisian'ny Jodaisma raha vao zato taona kosa ny Sionisma. Olona tsy mpino an'Andriamanitra mampiasa ny fivavahana hahazoany tombotsoa manokana izany Sionista izany. Manambara avo sy mafy ny Jiosy mpivavaka fa ao amin'ny boky fivavahany dia tsy azy ireo ny tany palestiniana. Fa ny amin'izany indray moa dia adihevitra hafa tsy tiako idirana ny amin'iny. Tsy mpivavaka aho tsinona
Milaza momba ny ady ihany koa ny fiarahamonina Jiosy misy any Maraoka, ary manaporofo ihany koa ny fisarahan-kevitra misy ao amin'ny Maraokana. Avy @ The View from Fez:
Manameloka ny fanafihana Isiraelina any Gaza ny Sekretera Jeneralin'ny Foundation for Moroccan Jewish Heritage [Andry mpiahy ny taranaky ny Jiosy Maraokana], Simon Lévy, ary miantso ny fivondronanmbe iraisam-pirenena hamaha ny olan'ity ady ity.
“Rikoriko amin'ny fandripahana tsy azo hamarinina sady efa nahafatesana olona manodidina ny 1000 any Gaza izahay,” hoy Levy nandritra ny fanambarana nataony tao amin'ny fandefasam-peo maraokana “Rabat Chaîne Inter”.
“Mampihoron-koditra izy ity ary tsy tahaka izao no ijereko ny Jodaisma,” Hoy Levy, manantena ny hametrahana ny fandriampahalemana sy hahita ny fampiatoana ny fandripahana ny palestiniana any Gaza.
Ny teny Espaniola dia nadikan'i Gabriela Garcia Calderon Orbe